Khadadka Madow ee Suuqgeynta waxay kusoo Laabanayaan Maalgashi | Martech Zone
Khadadka Madow ee Suuqgeynta waxay kusoo Laabanayaan Maalgashi
Jimce, Maarso 28, 2014 Jimce, Maarso 28, 2014 Douglas Karr
Shalay, waxaan sameeyay kalfadhi ku saabsan Warbaahinta Suuq-geynta Bulshada ee la yiraahdo Sida Looga Bedelo Kuwa Raacaya Kuwa Soo Kordhaya si Ay U Soo Saaraan Natiijooyin Baraha Bulshada. Anigu had iyo jeer waxaan ahay mid ka soo horjeeda talada had iyo jeer ku riixda warshadan xitaa xitaa ku tiirsan muranka. Qiyaasta dhabta ah ayaa ah in ganacsiyada ay sii wadaan inay raadiyaan taageere iyo kororka raaciyaha warbaahinta bulshada - laakiin waxay qabtaan shaqo aad u xun oo ah inay beddelaan dhagaystayaasha cajiibka ah ama bulshada horay u jirtay.
Intii lagu gudajiray fadhiga, xitaa waxaan aad ugu fogaaday sidii aan waxbadan uweydiin lahaa Qiyaasta ROI ayaa sheeganeysa halkaas marka ay timaado soo noqoshada maalgashiga dadaalladaada warbaahinta bulshada. Mid ka mid ah saaxiibbada ugu weyn boggan ayaa ah Eric T. Tung… Yaa si deg deg ah u soo dhigay:
Ha aadin @Nichoole_KellyFadhiga, sababaha warbaahinta bulshada ROI waa BS! @douglaskarr # SMMW14
Waxay si gaar ah u ahayd maadama saaxiibkay aad loo ixtiraamo (iyo sayidka karaoke), Nicole Kelly, ayaa si isku mid ah u wadaageysay kalfadhigeeda: Noocyadu waxay dib u soo celinayaan daahfurnaanta cabirka Baraha Bulshada ROI. Dooh!
Maaha inaanan rumaysanayn inuu jiro ku soo noqo maalgashiga - Waxaan aaminsanahay inay jirto dib-u-soo-celin weyn oo xagga maalgashiga bulshada ah. Xaqiiqdii, waxaan aaminsanahay inay aad uga wanaagsan tahay shirkadaha badankood xilligan aaminsan. Dhibaatadu waa cabirka. Waxaa jira siyaabo badan oo dadaalkaaga warbaahinta bulshada uu saameyn ugu yeesho soo noqoshada maalgashiga:
Tilmaam toos ah - dadku waxay arkeen fariinta wayna iibsadeen.
Qaab aan toos ahayn - dadku fariinta way wadaageen ama qof ayey bulsho ahaan kuugu soo gudbiyeen oo iyagaa iibsaday.
Astaanta Nooca - dadku way arkaan aad khadka tooska ah oo aan kuu arko inaad tahay hay'ad ka shaqeysa waxsoosaarkaaga, taasoo u horseedeysa inay baaraan alaabadaada iyo adeegyadaada.
Aaminaad - dadku waxay kugula socdaan khadka tooska ah, waxaad kasbataa kalsoonidooda, taasoo u horseedaysa inay iibsadaan alaabadaada iyo adeegyadaada.
Ku xirnaanshaha tooska ah waa fududahay in la cabbiro… xoogaa raad raadin olole oo aad hoos u dhigtay. Dhibaatada leh cabirka baraha bulshada ROI la yimaado kuwa kale. Marwalba kama faa'iideystaan ​​raadinta ololahaaga - ama waxay yimaadaan oo wax ka iibsadaan bartaada iyada oo loo marayo marinnada kale ee suuq-geynta internetka.
Google Analytics waxay leedahay qalab cajiib ah oo loo yaqaan 'Multi-Channel Conversion Visualizer' halkaas oo aad ku arki karto in martidaadu ay adeegsadeen habab badan iyo in kale si ay u yimaadaan goobtaada. Shaashadan dhabta ah ee hoose - waxaad ku arki kartaa halka xariiqyadu isku badalayaan. Boqolkiiba aad u tiro badan oo ka mid ah beddelaadyada boggan ayaa ka yimid dadka ku soo galay barta in ka badan hal qaab.
In kasta oo aad ku soo gabagabeyn karto inaysan haysan barnaamij suuqgeyn emayl aad u wanaagsan - codsi dhab ah oo ROI ah oo ku saabsan taraafikada gudbinta iyo raadinta dabiiciga ah waa wax aan macquul ahayn maxaa yeelay ma heli kartid madax kasta oo soo booqda oo go'aan kama gaaro taas oo kanaalka ayaa ahaa maalgashiga iyaga ka dhigay inay go'aansadaan inay iibsadaan.
Waxaan soo gudbin lahaa taasi maahan taas oo, waa dheelitir dhammaantood. Suuqyayaashu waa inay fahmaan sida mid kasta oo ka mid ah istaraatiijiyadoodu u saamaynayso tan kale. Markaad yareyso dadaallada warbaahinta bulshada, tusaale ahaan, waxay saameyn ku yeelan kartaa beddelaaddaada raadinta dabiiciga ah! Sababta Sababtoo ah dadku ma xiiseeyaan waxa ay yihiin wax soo saarkaaga iyo adeegyadaadu sidaa darteedna adiga kuuma raadiyaan. Ama kalsooni darro ayaa ka haysata, sidaa darteed waxay raadiyaan tartamayaal leh joogitaan bulsheed oo wanaagsan kana beddela iyaga beddelkooda. Ama qof walbaa wuxuu ka hadlayaa kuwa kula tartamaya yaa do waxay leeyihiin joogitaan bulsheed oo muuqda… taasoo u horseedda maqaalo dheeri ah oo ku saabsan tartankaaga… taas oo u horseedaysa inay iyaga si fiican uga sarreeyaan.
Suuqgeyaal ahaan, waxaan u baahanahay saadaalin Analytics qalab aqoonsan saameynta iyo xiriirka dhammaan dadaalkeenna - waxay naga caawinayaan inaan fahamno sida ay midba midka kale u quudinayo iyo sida ay midba midka kale ula shaqeeyaan. Mar dambe maahan haddii aan rabno inaan wadaagno bulsho ahaan iyo cabbiraadda soo noqoshada dadaalladaas si toos ah, waa arrin ku saabsan tijaabinta iyo hagaajinta dadaalkeenna warbaahinta bulshada iyo daawashada saameynta guud ee istiraatiijiyadda dhammaan dadaalladeena suuq-geynta dijitaalka ah.
Shaqadeenu mar dambe ma aha inay go'aamiso nooca dhexdhexaadka ah ee la adeegsanayo… waa arrin isku dheelitirnaanta ilaha si loo wanaajiyo inta dadaal ee aan gelinno mid kasta. Qiyaas dashboardkaaga oo ah sida loox dhawaaq ah, oo wicitaannada kor iyo hoos u rogaya illaa muusiggu qurux badan yahay. Soo noqoshada maalgashiga warbaahinta bulshada awooddo waa la qiyaasi karaa - laakiin xaqiiqadu way ka sii mugdi badan tahay talooyinka qaarkood.
Fiiro gaar ah: Waxaad awoodi kartaa Iibso kaar daldalaad ah Dunida Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada qayb yar oo ka mid ah kharashka kaqeybgalka waxaadna dhageysan kartaa fadhigeyga iyo dhammaan bandhigyada kale!
Tags: roi suuq geyntasoo celinta suuqgeynta iimaylka maalgashigaiimayl roisuuqgeynta roimrooiraadinta lacag bixintaku soo noqo maalgashigaraadi suuq geyntawarbaahinta bulshada ku soo noqo maalgashigawarbaahinta bulshada roi
Aaminaad, Baraha Bulshada iyo Dareenka kafaala qaadka
Mar 28, 2014 at 3: 30 PM
Ah, boqortooyadayda qalab qalabaynta suuqgeynta wanaagsan oo la socon kara luqadda jirka ee dhijitaalka ah isla markaana la tacaali kara suuq-geynta kanaallo badan, hoggaaminta dhibcaha, iwm. oh, sug Lo #Eloqua.